FAHAFATESAN’NY PROFESORA ZAFY ALBERT : Fandevenana vao hidodododo ny Filoham-pirenena
Ranomaso tsy miaraka amam-paty. Izay no azo hamehezana ny fihetsiky ny filoham-pirenena, Hery Rajaonarimampianina manoloana ny fahasalan’ny filoha teo aloha, ny Profesora Zafy Albert. 17 octobre 2017
Araka ny vaovao voaray dia amin’ny sabotsy 21 oktobra ho avy izao, amin’ny andro hanatanterahana ny fandevenana ny nofo mangatsiakany any Betsiaka-Ambilobe vao ho avy hanatrika izany ny tenany.
Nandritra ny fotozana nahateto Antananarivo ny razana dia saika ireo solotenany hatrany no nijoro, ary tany Italy toerana izay namitany iraka no nitondra ny teny fampiononana ho an’ny fianakaviana navelan’ny maty ny filoha. Gazety mpiseho isan’andro iray no nitondra fanakianana mahakasika izay tsy nahateo ny filoham-pirenena nandritra ireo lanonam-panaovam-beloma farany an’i Profesora Zafy Albert teto Antananarivo izay. Ny tenany no tokony ho lohalaharana amin’ny trangana fahoriana tahaka ireny. Raha tsiahivina dia nandrasana teny amin’ny trano fonenany teny amin’ny villa La Franchise Ivandry ny vatana mangatsiakany taorian’ny fahatongavan’ny razana teny Ivato.
Nandrasana tao amin’ny lapan’ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena ny alahady ary omaly no niainga nihazo an’Ambilobe toerana hanatanterahana ny fandevenana. Tsikaritra fa anisany nampiray sy nampiombom-po an’ireo mpanao politika tsy nitovy hevitra ny nahalasana ny profesora Zafy Albert. Saika tonga niaraka naneho alahelo tamin’ny fianakaviany avokoa ireo mpanao politika eto an-toerana ary nisongadina tamin’izany ireo filoham-pirenena telo teo aloha dia ny Amiraly Didier Ratsiraka, i Marc Ravalomanana ary ny filohan’ny tetezamita Andry Rajoelina.
Tsikaritra teny amin’ny lalana sy ny toerana nandalovan’ny fiara nitondra ny vatana mangatsiakan’ity filoham-pirenena teo aloha ity ny alahelon’ny vahoaka Malagasy. Nanakoako ny hoe « tsy misy mahasolo ny rain’ny Demokrasia ».
Votsotra ny menoty rehetra natao taminy BEBETO JIOLAHY RAINDAHINY AO TOAMASINA (273) 13 octobre 2018 Nisy nikasa hanakantsakana ny fandalovan’ny kandidà Andry Rajoelina NOSY BE (186) 15 octobre 2018 Lehilahy miisa 3 no voasambotry ny zandary VONO OLONA FENO HABIBIANA TENY TANJOMBATO (180) 13 octobre 2018 Nandresy lahatra ny mponin’Itasy FILOHAN’NY ANTOKO MMM – FREEDOM - MAITSO (165) 15 octobre 2018 Niloa-bava sy nitondra valin-kafatra manoloana ny fitakian’ireo kandidà 22 FILOHAN’NY HCC (159) 17 octobre 2018 Efa betsaka ireo lasibatra eto Antsiranana FISOLOKIANA AMIN’NY FINDAY (106) 18 octobre 2018